Martech Zone - मार्केटिंग टेक्नोलोजी
पढ्ने समय: <1 मिनेट अमेरिकीहरूका लागि ठूलो खबर: डेट्रोइटका एक संघीय न्यायाधीशले बिहीबार बिहान निर्णय सुनाए कि एनएसएको "आतंकवादी निगरानी कार्यक्रम" ले अमेरिकी संविधानको उचित प्रक्रिया र स्वतन्त्र बोली ग्यारेन्टीलाई उल्लंघन गरेको छ र बुश प्रशासनको वारेन्ट इभ्रास्ट्रपिंगलाई तुरून्त र स्थायी रोक्न आदेश दिए र इन्टरनेट संचार। वायर्डमा पूर्ण कथा ... म ACLU को प्रशंसक होइन (यद्यपि म EFF को एक सदस्य हुँ) तर यसको लागि यो ठूलो जीत हो
बिहीबार, अगस्ट 17, 2006 सोमबार, अगस्ट 24, 2009 Douglas Karr
पढ्ने समय: <1 मिनेट रोयटर्सले दोस्रो कक्षाका शिक्षक जोन मार्क कारलाई जोनबेनेट राम्सेको हत्याको आरोपमा पक्राउ गरिएको बताएको छ। यदि तपाईं मेरो साइट भर मा भयो र तपाईं उत्सुक थिए ... होइन, कुनै सम्बन्ध छैन।
बुधवार, अगस्त 16, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
पढ्ने समय:5मिनेट मसँग आज छुट्टी थियो (मलाई यसको आवश्यक थियो!)। मैले अर्को ब्ल्गमा पढें कि धेरै मानिसहरू "१०१" खोज्छन्। त्यसैले ... सामान्य रूपमा, म प्रतिक्रिया के हो भनेर हेर्न सिद्धान्त परीक्षण गर्दैछु। म यसमा आउन कत्ति सजिलो भएकोमा छक्क परें, संसारमा धेरै चीजहरू छन्, व्यापारमा, र यो देशले मलाई पागल बनाउँछ। अवश्य पनि, हुनसक्छ यो म मात्र हो। स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्
पढ्ने समय: <1 मिनेट केटा प्रविधि छिटो विकसित हुँदैछ! म निश्चित छुईन तपाईंहरू मध्ये कति जना अल्पसंख्यक रिपोर्टमा टम क्रूजलाई याद गर्नुहुन्छ, जहाँ उनी भर्चुअल डिस्प्ले मार्फत जानकारीको माध्यमबाट पल्टिरहेका छन्। यहाँ पूर्वावलोकन विशेष प्रभाव देखाउँदै छ: केहि वर्ष पहिले, यो केवल एक विशेष प्रभाव थियो। टेक्नोलोजीको नयाँ वास्तविकताको भिडियो यहाँ छ कसरी व्याख्या गर्दछ यसले कसरी कार्य गर्दछ: तपाईं ईन रियलिटीको वेबसाइटमा केही अझ उत्कृष्ट उदाहरणहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
मंगलवार, अगस्त 15, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
पढ्ने समय: <1 मिनेट म टम पीटर्सको ठूलो प्रशंसक हुँ। सेठ गोडिन जस्तै, टम पीटर्स स्पष्ट प्रभावी संचार को कला मा महारत छ। म कुनै पनि हिसाबले उनीहरूको प्रतिभाको खण्डन गर्न खोजिरहेको छैन। मैले यो प्रतिभा धेरै नेताहरूमा पाएको छु जुन मैले कार्य गरें - तिनीहरू अतुलनीय जटिल मुद्दा लिन सक्षम हुन्छन् र यसलाई सरल बनाउँदछन् ताकि समस्या र समाधान यसमा समावेश सबैको लागि स्पष्ट हुन्छ। यहाँ एक टम पीटर्स बाट एक महान उद्धरण छ
V अघिल्लो 1 ... 1,010 1,011 1,012 ... 1,026 अर्को →
1011 पृष्ठ 1026